ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: တူသော အကျိုး ပေးသင့်သလား။
by Marlu San on Wednesday, November 7, 2012 at 11:46pm ·
ကျွန်မ စာမရေးဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ ခေါင်းထဲမှာ တွေးနေမိပြီး၊ စိတ်ထဲမှာ ရေးချင်နေတာတွေကတော့ အများကြီးပါ။
ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကို တာဝန်မပေးပါပဲလျက်၊ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ချင်လို့ လုပ်ခဲ့မိတဲ့ အလုပ်တခုက သြဂုတ်လ ကတည်းက အလုပ်များနေလိုက်တာ အောက်တိုဘာလဆန်း အထိပေါ့။
အခုတော့ အားပြီ ဆိုကြပါစို့။ အချိန်လေး နည်းနည်း ရလာပြီဆိုတော့ စာရေးဘို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ရေးချင်တာတွေက အများကြီး။ ရေးလက်စ ၀တ္ထုရှည်လေးကိုလည်း ဆက်ရေးချင်သေးတယ်။ အရင်ရက်ပိုင်းတွေကတည်းက ခေါင်းထဲ တ၀ဲဝဲလည် စိတ်ကူးနဲ့ ရေးနေမိတာတွေလဲ လက်က ချ ရေးချင်တယ်။
ဒါပေမယ့် မပြုမဖြစ် ပြုချင်တဲ့၊ ပြုရမယ့် ကိစ္စလေးတွေကလည်း ရှိပြန်သေးတယ်လေ။ တနယ်တကျေးက လာလည်တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းကို တွေ့ဆုံ ဧည့်ခံဘို့၊ တပြည်တရွာက ကြွလာတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော် တရားပွဲကို သွားဘို့၊ မွေးရပ်မြေကို ပြန်တော့မယ့် ကိုကျော်သူကို နှုတ်ဆက်ဘို့။
ဒါနဲ့ ကိုကျော်သူ နှုတ်ဆက်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်၊ သောကြာနေ့ ညနေမှာ ရောက်သွားတယ်။ ကွယ်လွန်သူ ဆရာ ဦးတင်မိုးရဲ့သမီးငယ် မိုးချိုသင်းတို့ မေတ္တာရိပ်မြုံ ဂေဟာလေးကို ရောက်သွားတော့ ခြံထဲရော၊ လမ်းမ ပေါ်မှာပါ ကားရပ်စရာ နေရာ မရှိတော့။ ကားတွေက အပြည့်။ ဒါနဲ့ပဲ တပွဲထဲ လာကြတဲ့ လူအချင်းချင်း၊ ပြန်သူရှိမှ ကားဖယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး အရင် ရောက်သူတွေ ကား အနောက်ကနေ ပိတ်ကာ ရပ်လိုက်ရတယ်။
အိမ်ထဲ မှာလည်း လူအပြည့်။ အိမ် တဘက်ခြမ်းမှာ အမျိုးသားတစု စကားကောင်းနေသလို၊ တဘက်ခြမ်းမှာတော့ ကျားကျား မမ အရွယ်စုံက ကာရာအိုကေ သံပြိုင် ဆိုနေကြတယ်။ ပျော်စရာကြီးပေါ့။
အိမ်အတွင်းထဲ ထမင်းစားခန်းဆီ သွားပြီး ကိုကျော်သူနဲ့ နှုတ်ဆက် စကားပြော။ ဘိတ်ကပ်ကျေးကိုက် ခေါက်ဆွဲကြော်ကို သူလဲ စား၊ ကိုယ်လဲ စား။ ကိုကျော်သူ ခမြာမှာတော့ ခေါက်ဆွဲ တပုဂံ ဖြောင့်ဖြောင့် မစားရ။ တယောက်ပြီး တယောက် လာနှုတ်ဆက်သူတွေနဲ့ စကားပြောရတာ မနားရအောင်ပါပဲ။
ကိုယ်ကလဲ ပူပူနွေးနွေး ပြီးထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးကတည်းက မဆုံရသေးတဲ့ ပွဲ လုပ်ဘော် ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတော့ ပွဲ အကြောင်းတွေ စမြုံ့ပြန်ကြ၊ ကောင်းကွက်ကလေးတွေ ပြန်ပြောကြ၊ ချွတ်ချော် သွားခဲ့တာတွေကို သင်္ခန်းစာယူ နိုင်ဘို့ ပြန် သုံးသပ်ကြပေါ့။ အများစုကတော့ ကိုယ့်လိုပါပဲ၊ ဆယ်ရက်ကျော် ကြာနေတာတောင် ပျော်လို့ မ၀သေးပုံပဲ။ ပွဲအကြောင်း စကား စလိုက်တာနဲ့ အပြုံးတွေ ၀င်းလက်သွားတဲ့ မျက်နှာတွေပဲ မြင်ရတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖန်သားမျက်နှာပြင် အပေါ်မှာ မဟုတ်၊ ပုံနှိပ်စာရွက် အပေါ်မှာ မဟုတ်ပဲ လူကိုယ်တိုင် မြင်လိုက်ရတာကို ပြန်တွေး တွေးပြီး ပျော်နေကြဆဲ။ နှစ်သိမ့် ပီတိ ဖြစ်လို့ မ၀ကြသေး။ နှစ်ရှည်လများ ခွဲခွာနေခဲ့ရတဲ့၊ စိတ်ကူးနဲ့ လွမ်းနေ၊ တမ်းတ နေရတဲ့ အမေ့ကို လူကိုယ်တိုင် မြင်ခွင့် တွေ့ခွင့် ရလိုက်တဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ ၀မ်းသာမှု ခံစားချက်မျိုးဆိုတာ လူတိုင်း လိုလို ပြောသလို၊ ပြောသူကိုလဲ ငြင်းသူ နည်းပါတယ်။
ပွဲမှာ တင်စားပြောခဲ့သလို ဒါ ကျွန်မတို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမေ။
ကွဲကွာနေခဲ့တဲ့ အမေ့ကို ပြန် တွေ့ရခြင်း။
အချိန်နည်းနည်းကြာလာတော့ အိမ်တဘက်ခြမ်းက အမျိုးသားဝိုင်းက ရေချိန်တက်လာသလို၊ ကာရာအိုကေ၀ိုင်း ကလဲ အရှိန်တက်လာပါတယ်။
ကိုကျော်သူကတော့ အိမ်နောက်ဖေး အခန်းထဲမှာ ပြောဆိုနေဆဲ၊ အလုပ်များဆဲ။ သူ့ကို နှုတ်ဆက်သူတွေနဲ့ အလုပ် ရှုတ်ဆဲ ပဲ။ သူ့ခမြာ ဘယ်ဝိုင်းမှာမှ မပါနိုင်ရှာဘူး။
ကျွန်မတို့ စကားကောင်းနေတုန်း ဘယ်က ဘယ်လို စလာတယ် မသိ။ နယ်က လာတဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက် က ကျွန်မတို့ကို သီချင်းဆိုဘို့ အတင်း လာခေါ်တယ်။
မဆိုတတ်ပါဘူး ပြောလဲ မရ။ တဦးချင်း မဆိုချင်ရင် စုံတွဲ ဆိုရမယ် တဲ့။
သွားပြီ လို့။ စုံလဲ မတွဲဘူး၊ တကိုယ်တော်လဲ မချဲဘူး။
အကိုတွေ မောင်တွေ သီချင်းဆိုကြ၊ တီးကြ ခတ်ကြတာတွေ၊ ဂီတလောက မျိုးရိုးရှိတယ်နဲ့၊ ဘာဘာညာညာ လာ ညောင် နေတော့ ကျွန်မက စာရေးတာပဲ ရတယ်။ အဲသည် ဂီတနဲ့ ကျွန်မက ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်း ပေါ့။ ဘယ်လိုမှ မနီးစပ်တဲ့ အရာတွေပါ ဆိုပြီး မဆိုပါရစေနဲ့ တောင်းပန်။ ခေါ်သူက အမျိုးမျိုး ကုတ်ကပ် ခေါ်နေတာကို သည်ကလဲ အားမနာတမ်း အတင်းကို လှည့်ပတ် ညင်းတော့တာပဲ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ မနေသာတဲ့ အိမ်ရှင် ကိုကျော်ဝဏ္ဏ ၀င်ကယ်ကာမှ ဈေးတည့်သွားတယ်။ ကျွန်မတို့ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းကို ပြော၊ သူ (ကိုကျော်ဝဏ္ဏ) ဆိုပေးမယ် တဲ့။
အဲဒါမှ ခက်တော့တာပဲ။ လင်စုံမယားရယ်လို့ ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်ဘက်မှာ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းက မရှိ။ သူ နှစ်သက်တဲ့ သီချင်း၊ ကျွန်မ သဘောကျတဲ့ သီချင်းတွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် တပုဒ်ထဲ တူညီ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မဟုတ်။ သည်တော့ ကျွန်မတို့ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ဘာသီချင်းဖွင့်သလဲ တဲ့၊ မေးပြန်တယ်။ သွားပါပြီ။ သူနဲ့ ကျွန်မမှာ မင်္ဂလာမောင်မယ်သီချင်း ဆိုတာ မရှိ (မင်္ဂလာဆောင်မှ မရှိခဲ့တာ)။
ဒါပေမယ့် မရှိဘူး ပြောတာကို လက်မခံပဲ ဘယ် သီချင်းလဲ၊ ဘာ သီချင်းလဲ အတင်း ကပ်မေးနေတာမှာ ခေါင်းထဲ ဖြတ်ကနဲ ၀င် လာတဲ့ ခေါင်းစည်းကလေးကို ပြောလိုက်မိတယ်။
အကျိုးတော်ဆောင် ဆိုပေးမယ့်သူကလဲ အဲသည် သီချင်းရှိတယ်၊ ဆို တတ်တယ် ဆိုပြီး ဈေးတည့်သွားတယ်။
နဘေးက အသက် သုံးဆယ်လောက် မိန်းမငယ်လေး တယောက်က ‘အော် အဲဒါ xxxx ရဲ့ သီချင်း’ တဲ့။
သူ ပြောတဲ့ အဆိုတော်ကို ကျွန်မ မသိ။ ကျွန်မ စ ကြားဘူးတာက ကလေးဘ၀ ငါးတန်းလား၊ ခြောက်တန်းလားမှာ အဆိုတော် (အကိုကြီး) မင်းမင်းလတ် ဆိုတာ ကြားဘူးတယ်။ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ မောင်ငယ် ဇော်ဝင်းထွဋ် ပြန်ဆိုတာ ကြားဘူးတယ်။ အခု နောက်ဆုံး ပြန်သီဆိုသူကို မသိသလို သူဆိုတာကိုလဲ မကြားဘူး ဘူး။ အချိန်တွေ ဘယ်လောက် ကြာညောင်းခဲ့ပြီး ကိုယ်တွေ ဘယ်လောက် အိုမင်းခဲ့ပြီဆိုတာ သတိပြုလိုက်မိပါတယ်။
ချိုသင်းက အိမ်ရှေ့မှာ သီဆိုနေသူတွေဆီမှာ သီချင်းစာရင်း သွားပေးတုန်း ထိုမိတ်ဆွေက အတူထိုင်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေကို မေးတယ်။
“သည် သီချင်းရဲ့ မူလ လက်ဦး သီချင်းအမှန်ကို သိသလား” တဲ့။ လူငယ် လေး ငါးယောက်လောက် ရှိတာ တယောက်မှ မသိကြဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်မက ၀င်ဖြေလိုက်မိတယ်။
“Dawn ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က Tony Orlando ဆိုထားတဲ့ ‘Tie A Yellow Ribbon’ သီချင်း။ ကြာလှပြီ။ အဲသည် သီချင်း ပေါ်တုန်းက အန်တီတို့တောင် ကလေးဘ၀ ဆယ်နှစ် ကျော် ကျော် လောက် ရှိသေးတာ။ 1970 လောက်က ထင်တယ်”
လူငယ်တွေ အားလုံး တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့် ပြုံးပြီး ‘ဟာ ဒါဆို မမွေးသေးဘူး’ ပြောကြတယ်။ ဟုတ်မှာပါ။ ကြာတော့ ကြာလှတာ သိပါတယ်။
ခဏနေတော့ ချိုသင်းက အမရေ လာ၊ လာ ဆိုပြီး လှမ်းခေါ်လို့ အိမ်ရှေ့ဘက် ထွက်လာခဲ့တယ်။
ရုပ်မြင်သံကြား ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ပန်းတွေနဲ့၊ ဖဲကြိုးဝါတွေနဲ့ သီချင်းတီးလုံးက စပါပြီ။
ကိုကျော်ဝဏ္ဏတယောက် အစပိုင်းလေးပဲ တယောက်တည်း ဆိုလိုက်ရတယ်။ အခန်းတခုလုံး ရှိသမျှ လူကုန်နီးပါးက လက်ခုတ်လက်ဝါးတီးပြီး အားရပါးရ လိုက်ဆိုကြတယ်။ တချို့ကလဲ လိုက်က နေကြတယ်။ ကျွန်မလဲ ပျော်မြူးစွာနဲ့ လက်ခုတ် တီး၊ အသံတိုးလေးနဲ့ လိုက်ဆိုနေမိတယ်။
လူ အများ ကြားဘူးကြမှာပါ။ မြူးကြွတဲ့ ဂီတ တီးလုံးနဲ့ သည်သီချင်းလေးကို။ အိမ်အပြန်မှာ ယုဇနပင်ပေါ်မှာ ဖဲကြိုးဝါ ချည် ထားတာ တွေ့ရင် ချစ်တယ် အဖြေ ရမယ်ဆိုတာ။ ဗမာလို စာသားထည့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စတီရီယို ကော်ပီ သီချင်းမှာ သီချင်းတေးသွားနဲ့ လိုက်ဘက်အောင် ချစ်ကြောင်း အဖြေတောင်းတာကို ထည့်စပ်ထားပေမယ့် တကယ့် မူရင်းသီချင်း ကတော့ အဓိပ္ပါယ် နည်းနည်းလေး ကွာပါတယ်။ အဝေးကနေ အိမ်ပြန်လာတာကို လက်ခံဦးမှာလား မေးခဲ့တာပါ။ လက်ခံဦးမယ်ဆိုရင် ဖဲကြိုးဝါ ချည်ထားပေးဘို့ပါ။
ဒါပေမယ့် စတီရီယို ကော်ပီသီချင်းရေးခဲ့တဲ့သူကလည်း အရည်အချင်းခေသူ မဟုတ်ပါဘူး။ စာသားပြည့်ရင် ပြီးရော ဆိုပြီး သီချင်းသွားနဲ့ လိုက်ဘက်အောင် စာသားတွေ အသလွတ် ထည့်ရေးထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ အမှတ် မမှားရင်တော့ ပုသိမ် မောင်စိမ်းသူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (မှားခဲ့ရင်လဲ အမှန်သိသူများ ပြင်ပေးပါ။)
‘အိမ်ပြန်အလာ တပေါင်းနေ့ ချစ်စရာနွေ၊ ကြွေရွက်တွေ ၀ဲလို့ ဝေ့လည် နေကြတယ်’ ဆိုတဲ့ အဖွင့်စာသားကတင် အဓိပ္ပါယ် အပြည့် ပါ ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ နွေရာသီဆိုတာ အလွန် ပူပြင်းတဲ့ အချိန်။ သည်အထဲမှာမှ နွေရာသီ လေးလတာ မှာ မတ်လထဲ ကျတဲ့ တပေါင်းလ ဆိုတာ အပူဆုံးလ ပါ။ ဒါပေမယ့် အပူတောမှာ အိမ်ပြန်လာရချိန်ကို ချစ်စရာနွေလို့ ရေးစပ်ခဲ့ပုံက ရာသီတွေ ဘယ်လို ပူပြင်းပါစေ၊ မျှော်လင့်ချက်ရှိရင် ချစ်စရာအချိန် ဖြစ်နေတာကို တင်စား ရေးစပ် ထားတယ် ထင်ပါတယ်။
ဒဿနိကဆန်ဆန် ပြောရမယ် ဆိုရင် မျှော်လင့်ချက်တခုနဲ့ ရှင်သန်နေရတဲ့ လူတွေရဲ့ ဘ၀ပေါ့။ တချိန်ကျရင် ဆိုတဲ့ မိမိရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်ဝလိုတဲ့ စိတ်စောမှုတွေနဲ့ လူတွေဟာ အသက်ရှင်နေရတယ် ဆိုတာ။
မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို စပ်ထားတာမှာတော့ “I'm comin' home, I've done my time” (ကျသင့်တဲ့ အချိန်ကို ပေးဆပ်ပြီး အိမ်ပြန်လာတယ်) လို့ ဆိုထားတယ်။ တတိယ စာကြောင်းမှာ ‘I'd soon be free’ (မကြာခင်မှာ လွတ်မြောက်မယ်) လို့ သီကုံးထားတော့ ထောင်က အပြန်လမ်းကို ဆိုလိုတာလား၊ စစ်ပွဲမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အိမ်ပြန်လာတာလား။ သေချာတာ ကတော့ အခြေအနေအရ ခွဲခွာချန်ထားခဲ့ရတဲ့ အချစ်ဟောင်းကို သူ့ကို ပြန် လက်ခံမယ် ဆိုရင် ဖဲကြိုးဝါလေးကို ၀က်သစ်ချပင်အို မှာ ချည်ထားပေးဘို့၊ တောင်းဆိုထားတဲ့ အဖြစ်ပါ။
သည်သီချင်းလေးထဲကလို သစ်ပင်တွေမှာ၊ ခြံစည်းရိုးတွေမှာ၊ အိမ်တိုင်တွေမှာ၊ ပြူတင်းပေါက်ဘောင်တွေမှာ ဖဲကြိုးဝါ ချည်တဲ့ ဓလေ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လူသိများ၊ လုပ်ဆောင်သူ များခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် အမေရိကားမှာ ဆိုရင် ဗီယက်နာမ် စစ်ပွဲအပြီးမှာ နှစ်လရှည်ကြာစွာ ချစ်သူ ရည်းစား၊ ဇနီးမယားနဲ့ ခွဲခွာခဲ့ရသူတွေ အိမ်အပြန်မှာ သူတို့ရဲ့ ကြင်သူတွေ ရင်ခွင်သစ်တွေ့သွားတာတွေကို ရင်နာစွာ တွေ့တတ် ကြုံကြရလို့၊ အိမ်ရှေ့မှာ ဖဲကြိုးဝါ မတွေ့ရလျှင် အိမ်ထဲ မ၀င်တော့ပဲ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် လမ်းထိပ်ကနေ လှည့်ရှောင်သွားတဲ့ အဖြစ်တွေ မရေ မတွက်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့၊ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တချို့က Dear John လို့ အစချီတဲ့ အဆက်ဖြတ်စာ၊ ကွဲကွာစာတွေ ကြိုတင် ရခဲ့ပေမယ့် တချို့ကတော့ စာမလာ၊ ဘာသတင်းမှ မကြားရ ပဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်တွေကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဟာ ရင်ဝကို ဆောင့် အကန် ခံလိုက်ရသလို အလွန် အထိနာကြပါတယ်။
ရက်လရှည်ကြာစွာ စစ်မြေပြင်မှာ လောကငရဲ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံ ခံစားကျော်ဖြတ်နေစဉ်မှာ သူတို့အတွက် အသက် ရှင်သန်ဘို့ မျှော်လင့်ချက်က အိမ်အပြန်လမ်း တခုပါပဲ။ အိမ်မှာ စောင့်ကြိုနေမယ့်သူပါ။ ကျန်ခဲ့ ချန်ထားခဲ့ရသူရဲ့ အပြုံးမျက်နှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှသူများ ခမြာမှာတော့ …. … .. ။
ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာလည်း အနောက်တိုင်းက နိုင်ငံတွေလို သည်လို ထုံးစံ လူသိမများခဲ့ပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်၊ ၁၉၆၂ ကတည်းက သည်လို ဖဲကြိုးဝါ ချည်ပြီး ကြိုခွင့်ရရင် ကြိုချင်သူတွေ အများကြီးရှိခဲ့မှာပါ။ အိမ်အပြန်လမ်း ကြိုချင် တွေ့ချင် တာတောင် မတွေ့ရနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်တွေလဲ ရှိကြမှာပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ကြိမ် ခွဲကြရတာကို ရဲရင့်စွာ ရင်ဆိုင်ပြီး ချစ်သူ၊ ကြင်သူ အပြန်လမ်းကို စောင့်ခဲ့သူတွေ၊ အဖေအမေ ပြန်အလာကို မျှော်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေ၊ သားသမီး အပြန်လမ်းကို စောင့်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။
အခု ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ ပြည်တွင်း အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲကုန်ပါပြီ။
ပြည်ပထွက်သွားသူတွေ အတော်များများ ပြန်ချင်လျှင် ပြန်လို့ ရသလို၊ ပြည်တွင်းကလူတွေလဲ ပြည်ပကို ထွက်ခွင့် ဟိုယခင်ကထက် ပို လွယ်ကူလာပါပြီ။
ပြန်ခွင့်ရဦးမယ် မထင်ထားသူတွေ သွားကြ ပြန်ကြတာ တွေ့ရသလို၊ ထွက်လာခွင့် ရဦးမယ် မထင်ထားသူတွေ ခရီးတွေ ထွက်ကြ သွားလာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
မနှစ်က သည်လိုအချိန်မှာ စိတ်ကူးတောင်မယဉ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်ပခရီးစဉ် တွေမှာ သောင်းသောင်းဖျဖျကြိုဆို နှုတ်ဆက်ခွင့်တွေ ရနေကြပါပြီ။
သူမကို တွေ့လိုက်ရသူတိုင်းလိုလို နီးပါးက ထုတ်ဖေါ်မပြောပြတတ်လောက်အောင် ၀မ်းသာကြည်နူးကြရတယ် ပြောကြတယ်။ ရပ်ဝေးကနေ နှစ်ရှည်လများ သူမနဲ့ သူမတို့ အဖွဲ့ကို အားပေးထောက်ခံခဲ့သူတွေထံ အရောက်လာပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားတာပါ ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူကိုယ်တိုင် တွေ့လိုက်ရတာဟာ နှစ်ပေါင်း များစွာ ကွဲကွာနေတဲ့၊ အမျှော်ကြီး မျှော် စောင့်စားခဲ့ရသူကို တွေ့ရသလို ပီတိဖြစ်ကြ၊ ပျော်ရွှင်ကြရပါတယ်။
ရပ်ဝေးက သားသမီးတွေထံ အရောက်လာ နှုတ်ဆက်တဲ့ အမေလို့ တင်စား ပြောကြတယ်။
အမေနဲ့ သူမရဲ့ သားသမီးများ ပြန်ဆုံရတာ ပျော်စရာပါ။
ရပ်ဝေးကို ခဏလာပြီး အိမ်ပြန်သွားတဲ့ အမေ့ကို ပြည်မြန်မာမှာ ကျန်ရှိခဲ့သူတွေက အိမ်အပြန်လမ်းကို သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုကြ ပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြည်မြန်မာမှာ အကြာကြီးခွဲခဲ့ရတဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ပြန်မဆုံနိုင်တော့မယ့် အမေတွေ အဖေတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နှစ်လောက်ကစပြီး တဖွဲဖွဲ တစစ အိမ်က ထွက်သွားကြတဲ့ သားတွေ သမီးတွေထံက စာမလာ သတင်း မကြား ရတာကို အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကြောင့်ပါ၊ အခြေအနေ မပေးလို့ သတင်း မကြားရတာပါ။ အခြေအနေ ပေးရင် သူတို့ ဆက်သွယ်လာမှာပါ၊ တနေ့တော့ သူတို့ ပြန်လာမှာပါ ဆိုပြီး မျှော်လင့်တကြီး စောင့်ခဲ့ရတဲ့ ယနေ့ချိန်ခါ မိအိုဘအိုတွေမှာ သတင်းစာတွေ စာစောင်တွေ အထဲမှာ သူများသားသမီးတွေ ပြန်လာတာ၊ သူများမိသားစုတွေ ပျော်နေကြတာကို ကြည့်ပြီး ဘယ်နှစ်ယောက် ကြိတ် မျက်ရည် သုတ် နေကြမလဲ။
ကိုယ့်သား ကိုယ့်သမီး၊ ကိုယ်ချစ်ခင်ရသူတွေ ဘာဖြစ်သွားတယ်၊ ဘယ်လို ဖြစ်သွားတယ် တိတိကျကျ မသိကြသေးပဲ တနေရာရာမှာ အသက် ရှင်သန်နေသလိုလို၊ တနေ့မှာ အိမ်ဝက ဘွားကနဲ ပေါ်လာမှာလေလားနဲ့ မရေမရာ မျှော်လင့်ရတာက ဘ၀မှာ အပင်ပန်းဆုံး အလုပ်။ ဘာမှန်းညာမှန်း မသိရတာက အဆိုးဝါးဆုံး ခံစားချက်ပါ။ ကြုံဘူးမှ သိကြမယ့် ဝေဒနာပေမယ့် မကြုံစေချင်၊ မခံစားစေချင်ပါဘူး။
‘ယုဇနပင်ကိုင်းတွေ အကြားကို ကြည့်တယ် …
ယုံတောင် မယုံချင်ပါပြီကွယ် …
အား … ခေါင်းမှာ စည်းတဲ့ ဖဲကြိုးအ၀ါတွေ တပြုံကြီး၊ အများကြီး အများကြီး တွေ့တယ် …’
သီချင်းက အဆုံးသပ် နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကို ရောက်ပြီမို့ အခန်းထဲ သီဆိုကခုန်နေသူတွေ အားလုံး သံပြိုင် ၀ိုင်းအော် ကြတယ်။ အားရပါးရ တဟေးဟေး အော်သံတွေ ပျော်မြူးစွာ ထွက်လာသလို လက်ခုတ်သံတွေက တဖြောင်းဖြောင်း။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ လက်ခုတ် မတီးနိုင်တော့ဘူး။ လက်ခုတ်တီးတာ ရပ်သွားမိတယ်။
ဖဲကြိုးဝါ ချည် ကြိုဆိုတာ ကျွန်မတို့ ဗမာ့ဓလေ့ ထုံးစံ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရပ်ဝေးတနယ်ကို ထွက်သွားသူ၊ ကွဲကွာနေရသူကို ကြိုဆိုချင်တဲ့စိတ်ကတော့ လူမျိုးမရွေး၊ ဒေသမရွေး စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းပျမှုက အတူတူ ဖြစ်ကြမှာပါ။
သူများတိုင်းပြည် နိုင်ငံမှာ ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ဖဲကြိုးဝါချည်ပြီး စောင့်မျှော်ခဲ့သူတွေ၊ ဖဲကြိုးဝါ ဝေ့ယမ်းပြီး အဖေ အပြန်လမ်းကို စောင့်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေ၊ ဖဲကြိုးဝါ ကိုင်ပြီး သားသမီးအပြန်လမ်း ကြိတ်မျှော်နေတဲ့ အဖေတွေ အမေတွေ ရှိသလို ဖဲကြိုးဝါ ကူချည် ပေးရင်း စောင့်ခဲ့တဲ့ အမတွေ၊ ညီမတွေ၊ အကိုတွေ၊ ညီတွေ ရှိမှာပဲ။ ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေ အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေ၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ရှိမှာပဲ။ တကယ်တော့ ချစ်သူ ဇနီးမယား အိမ်ထောင်ဘက်၊ မိသားစုတွေတင်မက တဆွေလုံး တမျိုးလုံး၊ သိကျွမ်းခင်မင်သူတွေက အိမ်ပြန်လာသူတွေကို ကြိုဆိုခဲ့တာပါ။ ၀မ်းပမ်းတသာ ကြိုဆိုကြတာပါ။
ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာလဲ ဖဲကြိုးဝါ ပါပါ၊ မပါပါ၊ ကိုယ် သံယောဇဉ်ရှိသူကို ကြိုဆိုချင်ကြသူတွေ အများကြီး ရှိမှာပါ။
တခုပဲ ဖြစ်သင့်တာက၊ သည်လူတွေကို သိခွင့် ပေးသင့်တာက သူတို့ စောင့်မျှော်နေသူတွေကို ကြိုရမှာလား၊ မကြိုရ ဘူးလား။ ထွက်သွားသူတွေ ပြန်လာဦးမှာလား၊ ပြန် မလာတော့ဘူးလား။
ပြန်တွေ့ခွင့် ရှိဦးမှာလား၊ သည်ဘ၀မှာ မတွေ့ရတော့ဘူးလား။
ဒါတွေကို အကြောင်းမှန် သိသူများက တိတိကျကျ သတင်းပေးကြသင့်ပါတယ်။
အိမ်အပြန်လမ်း ရှိသူတွေ ပျော်ကြရပေမယ့် အိမ်အပြန်လမ်း မရှိတော့သူတွေကို စာနာပေးကြပါ။
ဘာ့ကြောင့် သူတို့ ပြန်မလာကြတော့တာလဲ သိသူများက ပြောပြကြပါ။
ခွဲချန်ထားခဲ့တဲ့ သူတွေဆီ သူတို့ ပြန်မလာကြတော့ဘူးဆိုတာ စိတ်မကောင်းပေမယ့် အသိပေးကြပါ။ စောင့်နေသူတွေ သိသင့်ပါတယ်။
‘ယုဇနပင်နဲ့ ဖဲကြိုးဝါ’ သီချင်းကို ဆိုသွားခဲ့ဘူးတဲ့ ကိုကြီးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ တပင်လုံး ဝေေ၀ဖြာအောင် ချည်ထားမယ့် ဖဲကြိုးဝါတွေကို တွေ့ခွင့် မရတော့တာ စိတ် မကောင်းပါဘူး။
တခုပဲ သိချင်တာက တူသော အကျိုးဆိုတာ ပေးတတ်သလား။
(၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ ရက်မှ စတင်ကာ မြန်မာပြည် အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှာ လူမသိ၊ သူမသိ အိမ် ပြန်မလာနိုင်ကြသူများ၏ မိသားစုများအတွက် ရည်ညွှန်းပါသည်။)
အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၂။
( From: http://www.elyrics.net/read/t/tony-orlando-lyrics/tie-a-yellow-ribbon-lyrics.html )
I'm comin' home, I've done my time; Now I've got to know what is and isn't mine; If you received my letter tellin' you I'd soon be free; Then you'll know just what to do if you still want me; If you still want me:CHORUS: Tieayellow ribbon 'round the old oak tree;
It's been three long years; Do you still want me?; If I don't seearibbon round the old oak tree; I'll stay on the bus; Forget about us; Put the blame on me; If I don't seeayellow ribbon round the old oak tree...
Bus driver, please look for me; 'Cause I couldn't bear to see what I might see; I'm really still in prison, and my love she holds the key; A simple yellow ribbon's what I need to set me free; I wrote and told her this: REPEAT CHORUS Now the whole damn bus is cheering; And I can't believe I see; A hundred yellow ribbons 'round the old oak tree; I'm comin' home
မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော် ဥက္ကဌ အဖြစ်မှ မသမာသူများလက်တွင်း မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲခံရပြီး ကျဆုံးသွားရသူ ကိုထွန်းအောင်ကျော်။
35Unlike · · Share
You, Nang Aung Htwe Kyi, မိုး စဲ, Maungmaung Skw and 32 others like this.
Thiri Nyunt Good one!
November 8, 2012 at 7:24am · Like · 2
Ma Kyee-dan ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက် ခံရပြီးမှ သေသွားရတယ်ဆိုတဲ့ တယောက်လားဟင်။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ သူ့ကြည့်ရတာ စိတ်သဘောကောင်းပုံပါ။
November 17, 2012 at 11:58pm · Like · 3
Marlu San ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲ သည်အကြောင်းတွေ ဖတ်ရကတည်းက စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာ၊ သူ့ဓါတ်ပုံလေး အပြုံးလေး မြင်ရတော့ ရင်ထဲ တကယ် နင့်မိတယ်။ စိတ်မကောင်းဘူး။
November 18, 2012 at 6:31pm · Like · 7
Nang Aung Htwe Kyi ဘာကိုဘယ်လို ပြောရမယ်မသိတော့ပါဘူးလေ ..
January 10 at 12:02am · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi http://youtu.be/7NCZ4l8FCFc
January 10 at 12:10am · Like · 5
Marlu San Nang Aung Htwe Kyi: thanks for the song link Ma Nge`.
Saturday at 9:54pm · Like · 2
အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား တူသော အကျိုးဆိုတာ ပေးတတ်ပါတယ်။မတရား ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ဖို့နှုတ်မိန့် ပေး သဘောတူခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာနိုင်အောင်၊ သတ်တဲ့နေ့ က ၀င်ရောက်သတ်ခဲ့ကြတဲ့ မျိုးဝင်း(သေဆုံး)။သံချောင်း(သာယာဝတီထောင်ထဲ)။ရော်နယ်အောင်နိုင်(ချင်းမိုင်မှာ)၊ လဆိုင်း(ယခု မြောက်ပိုင်းအေဘီ ဥက္ကဌ)၊အောင်ကြီး(အမေရိက)၊စိန်အေး(ပြည်တွင်းမှာ)၊သန်းဇော်(ပြည်တွင်းမှာ)၊ဇော်ဇော်မင်း (ပြည်တွင်းမှာ) ..အစရှိသူတွေ။ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက် မသတ်သော်လည်း သတ်သူတွေကို အားပေး..သေသူတွေသေတာကို စိတ်ထဲက ကြိတ်ပြီး ၀မ်းသာနေတဲ့( တောင်မြောက် အေဘီ ဥက္ကဌ သံခဲမိန်းမ ) ခင်ရွှေလှိုင်တို့ လို စာရေးပြီးသတ်နေသူတွေ..စိတ်ထဲက သတ်နေသူတွေ အားလုံး တခုသော ဘ၀မှာ ဖဲကြိုးဝါတွေ မမြင်ရသော တူသောအကျိုးကို ပေးကြလ်ိမ့်မယ်လို့ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကို ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
Yesterday at 3:07pm · Like · 3
Aye Aye Soe Win အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။
Yesterday at 4:11pm · Like
Aye Thu, Mungdung La Wawhkyung, May War and4others like this.
Marlu San · 38 mutual friends
အရင်က အဲသည်သီချင်းကို မြူးကြွတဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ကြိုက်ခဲ့ဘူးတယ်။ အခုကိုထိန်လင်းရေးတဲ့ 'ကျွန်တော် လူကက်ဆက်' ဖတ်ပြီးကတည်းက တိမ်တမာန်နဲ့ တခြားသီချင်းတွေပါ နားမထောင်ရဲအောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ကြားမိတိုင်း သူတို့ကို တွေးမိသလို ဟို တသိုက်ကိုလဲ ကျိန်ဆဲမိလို့။ အကုသိုလ် ဖြစ်ပါတယ်။
Yesterday at 11:19am · Unlike · 6
Aye Thu အဲဒီယုဇနပင်နဲ့ဖဲကြိုးဝါသီချင်းကိုအရင်ကမကြားဖူးခဲ့ဘူး။အခုနားထောင်
Aye Thu ကြည့်တော့အဆုံးထိတောင်နားမထောင်ဖြစ်ပါဘူး။ခံစားရလွန်းလို့
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:36 PM